ဗိမာန်တော်ရှိ ငွေပွဲစားများကို မောင်းထုတ်ခဲ့စဉ်က ယေရှု အမျက်ဒေါသဖြင့် အကြမ်းဖက်ပြုမူခဲ့ပါသလား ? (ရှင်ယောဟန် ၂း ၁၃-၁၆) - maranathamedia-myanmar.com
ဗိမာန်တော်ရှိ ငွေပွဲစားများကို မောင်းထုတ်ခဲ့စဉ်က ယေရှု အမျက်ဒေါသဖြင့် အကြမ်းဖက်ပြုမူခဲ့ပါသလား ? (ရှင်ယောဟန် ၂း ၁၃-၁၆)
တင်ထားသည် ဇွန် 07, 2022 မှ Kevin J. Mullins အထဲ၌ ဘုရားသခင်သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်
English Version: https://lastmessageofmercy.com/article/view/john-213-16-didnt-jesus-show-violence-and-anger-when-he-kicked-the
“ယုဒပသခါပွဲခံချိန် နီးသည်ရှိသော်၊ ယေရုရှလင်မြို့သို့ ကြွတော်မူ၏။ ဗိမာန်တော်၌ သိုး၊ နွား၊ ချိုးငှက် ရောင်းသောသူတို့ကို၎င်း၊ ပွဲစားများထိုင်လျက်ရှိသည်ကို၎င်း တွေ့တော်မူလျှင်၊ ရိုက်စရာဘို့ ကြိုးသေးများကို ပြုပြင်ပြီးမှ၊ ထိုသူအပေါင်းတို့ကို၎င်း၊ သိုး၊ နွားများကို၎င်း၊ ဗိမာန် တော်မှနှင်ထုတ်တော်မူ၍၊ ပွဲစားတို့၏ ငွေတင်ခုံများကို တွန်းပစ်မျောထားတော်မူ၏၊ ချိုးငှက်ရောင်းသောသူတို့အားလည်း၊ ဤဥစ္စာကို ယူသွားကြ။ ငါ့အဘ၏အိမ်တော်ကို ပွဲတဲမလုပ်ကြနှင့်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ရှင်ယောဟန် ၂း ၁၃-၁၆
ဤအဖြစ်ပျက်အကြောင်း တွေးသောအခါ လူအများစုက ယေရှုသည် အမျက်ဒေါသဖြင့် အကြမ်းဖက်ပြုမူခဲ့သည်ဟု ယူဆကြသည်။ “ယေရှုဟာ ဗိမာန်တော်ထဲ ဝင်ပြီးတော့ လူတွေကို တွန်းချပစ်လှဲပစ်တယ်” ဟု ဓမ္မဆရာတစ်ဦး ရေဒီရိုအစီစဉ်တစ်ခုတွင် ဟောပြောခဲ့သည်ကိုလည်း ကျွန်တော်ကြားဖူးသည်။ ထိုအဖြစ်ပျက်အကြောင်း လူတွေ သူတို့စိတ်ထဲပုံဖော်ထားသည့် ပုံစံကို အောက်ပါပုံနှစ်ခုတွင် တွေ့နိုင်သည်။
စားပွဲခုံများကို ယေရှု တွန်းပစ်ခဲ့သော်လည်း လူများအပေါ် ကိုယ်ထိလက်ရောက်ဆက်ဆံသည့်အကြောင်း ဖော်ပြချက်တစ်ခုမျှ မရှိပါ။ ယေရှုသည် အောက်ပါပညတ်အတိုင်း ပြုမူခဲ့ရုံဖြစ်သည်။
“သို့ဖြစ်၍၊ သူတို့၌ အဘယ်သို့ပြုရမည်နည်း ဟူမူကား၊ သူတို့ယဇ်ပလ္လင်များကို ဖျက်ရမည်။ ရုပ်တု များကို ဖြိုချရမည်။ အာရှိရပင်များကို ခုတ်လှဲရမည်။ ထုသောရုပ်တု ဆင်းတုများကို မီးရှို့ရမည်။ တရားဟောရာ ၇: ၅
ယေရှုသည် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှ အန္တရယ်မပြုပါ။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၇၀၀ ခန့်က ကြွလာမည့် မေရှိယအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ပရောဖက်ဟေရှာယ ပရောဖက်ပြုခဲ့သည်မှာ “သူသည် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုကို မပြု။”ဟု ဆိုထားပါသည်။ (ဟေရှာယ ၅၃း ၉) ထိုသူတို့သည် မိမိတို့အပြစ်ကို သိမြင်လာသောကြောင့် ကြောက်ရွံ့ထွက်ပြေးခဲ့ကြခြင်းသာဖြစ်သည်။ ယေရှုက ရိုက်နှက်တွန်းချသဖြင့် ထွက်ပြေးကြခြင်းမဟုတ်ပါ။ ထိုအချိန်တွင် ရှိနေသော ချစ်ဖွယ်ကလေးသူငယ်များသည် ယေရှုကို မကြောက်ရွံ့ကြသည်သာမက ဘုရားသခင့်ဂုဏ်တော်ကို ချီးမွမ်းခဲ့ကြသည်။ ထွက်မပြေးဘဲ ကျန်ရစ်ခဲ့သော မျက်ကန်းများနှင့် ခြေ၊လက်၊အင်္ဂါချို့တဲ့သူများလည်း အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းအခွင့် ရရှိခဲ့ကြသည်။ ရှင်မဿဲ၏ ရေးသားချက်ကို ဖတ်ကြည့်ပါ။
“ယေရှုသည် ဘုရားသခင်၏ဗိမာန်တော်သို့ ဝင်တော်မူပြီးလျှင် ဗိမာန်တော်၌ ရောင်းဝယ်သောသူ အပေါင်းတို့ကို နှင်ထုတ်၍၊ ငွေလဲသောသူတို့၏ ခုံများကိုလည်းကောင်း၊ ချိုးငှက်ရောင်းသောသူတို့၏ ထိုင်နေရာများကိုလည်းကောင်း တွန်းလှဲတော်မူလျက်၊ ငါ့အိမ်ကို ဆုတောင်းရာအိမ်ဟူ၍ ခေါ်ဝေါ်ကြလတ္တံ့ဟု ကျမ်းစာ၌လာသော်လည်း သင်တို့သည် ထိုအိမ်ကို ဓားပြတွင်းဖြစ်စေကြပြီတကားဟု မိန့်တော်မူ၏။ ထိုအခါ ဗိမာန်တော်၌ မျက်စိကန်းသောသူ၊ ခြေမစွမ်းသောသူတို့သည် အထံတော်သို့လာ၍ သူတို့အနာရောဂါကို ငြိမ်းစေတော်မူ၏။ ကိုယ်တော်ပြုတော်မူသော အံ့ဩဖွယ်အမှုတို့ကိုလည်းကောင်း၊ သူငယ်တို့ကလည်း ဒါဝိဒ်၏သားတော်အား ဟောရှဏ္ဏဖြစ်စေသတည်းဟု ဗိမာန်တော်၌ ကြွေးကြော်ကြသည်ကိုလည်းကောင်း၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီး၊ ကျမ်းပြုဆရာတို့သည် ကြားမြင်လျှင် အမျက်ထွက်ကြ၍၊ ဤသူတို့သည် အဘယ်သို့ပြောဆိုသည်ကို ကြားသလောဟု ယေရှုအား မေးကြလေသော် ငါကြား၏။ နို့စို့သူငယ်တို့ နှုတ်ထဲမှကိုယ်တော်သည် ချီးမွမ်းခြင်းကို ပြင်ဆင်တော်မူသည်ဟူသော စကားကို သင်တို့သည် တစ်ရံတစ်ခါမျှ မဖတ်ဖူးသလောဟု မိန့်တော်မူ၏။ ထိုအခါ သူတို့ကိုထားခဲ့၍ မြို့ထဲမှထွက်ပြီးလျှင် ဗေသနိရွာသို့ကြွ၍ ထိုညကို လွန်စေတော်မူ၏။” ရှင်မဿဲ ၂၁း ၁၂-၁၇
ယေရှုအကြောင်း ကောင်းကောင်းမသိသူများကသာ ယေရှုကိုအကြမ်းဖက်ပြုမူသူဟု ယူဆကြပါသည်။ လောင်သောမီးကဲ့သို့ ယေရှုထင်ရှားခဲ့စဉ်ကလည်း သိနာတောင်ခြေတွင် ဣသရေလတို့သည် သူတို့ကိုသူတို့ အပြစ်တင်ကာ၊ စီရင်ခဲ့ကြသည်။
“ထာဝရဘုရား၏ ဘုန်းတော်သည် တောင်ထိပ်ပေါ်မှာလောင်သော မီးကဲ့သို့ ထင်၍၊ ဣသရေလ အမျိုးသားတို့သည် မြင်ရကြ၏။” ထွက်မြောက်ရာ ၂၄း ၁၇
ဂျိမ်းဘုရင်ဘာသာပြန်ကျမ်း (KJV)တွင် အောက်ပါအတိုင်းရေးထားသည်။
ဘုရားသခင်၏စာရိတ္တတော်ကို တလွဲနားလည်ထားကြသဖြင့် သူတို့မျက်စိတွင် ဘုရားသခင်သည် သူတို့ကို လောင်ကျွမ်းမည့်မီးကဲ့သို့ ထင်မှတ်ကြသည်။ ယေရှု၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ငွဲလဲလှယ်သူတို့အား မိမိတို့အပြစ်ကို သိမြင်နားလည်စေကာ ဘုရားသခင်၏မေတ္တာနှင့် ခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားကို လက်ခံစေရန် ဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှ အပြစ်တင်၍မစွပ်စွဲပါ။ သူ့ကို ရန်သူကဲ့သို့ဆက်ဆံသူများကိုပင် မေတ္တာနှင့် တုံ့ပြန်သောသူဖြစ်ပါသည်။
“ငါချစ်သမျှသော သူတို့၏အပြစ်ကိုငါစစ်ဆေး၍ သူတို့ကိုဆုံးမတတ်၏။ ထိုကြောင့် ကိုယ်စိတ်ကို ကိုယ်နှိုးဆော်လော့။ နောင်တရလော့။ ငါသည်တံခါးရှေ့မှာရပ်၍ ခေါက်လျက်နေ၏။ အကြင်သူသည် ငါ၏အသံကို ကြား၍တံခါးကိုဖွင့်အံ့၊ ထိုသူရှိရာသို့ငါဝင်၍ သူနှင့်အတူ စားသောက်မည်။ သူသည်လည်း ငါနှင့်အတူ စားသောက်ရလိမ့်မည်။” ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၃း ၁၉
“သင်တို့မူကား ရန်သူတို့ကိုချစ်ကြသလော။ ကျေးဇူးပြုကြလော့။ တစ်စုံတစ်ခုကိုရမည်ဟု မျှော်လင့်ခြင်း မရှိဘဲ ချေးငှါးကြလော့။ ထိုသို့ပြုလျှင် သင်တို့အကျိုးကြီးလိမ့်မည်။ အမြင့်ဆုံသောဘုရား၏ သားဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ ထိုဘုရားသည် ကျေးဇူးမသိသောသူ၊ ဆိုးညစ်သောသဘောရှိသော သူတို့အားကျေးဇူးပြုတော်မူ၏။ ထိုကြောင့် သင်တို့အဘသည် သနားခြင်းစိတ်ရှိတော်မူသည်နည်းတူ သင်တို့သည်လည်း သနားခြင်းစိတ်ရှိကြလော့။” ရှင်လုကာ ၆း ၃၅, ၃၆
“ထိုကြောင့် သင်၏ရန်သူသည် မွတ်သိပ်လျှင် လုပ်ကျွေးလော့။ ရေငတ်လျှင် သောက်စရာဘို့ပေးလော့။ ထိုသို့ပြုလျှင်။ သူ၏ခေါင်းပေါ်၌ မီးခဲကိုပုံထားလိမ့်မည်။ အဆိုးအားဖြင့် အရှုံးမခံနှင့် အကောင်းအားဖြင့် အဆိုးကို နိုင်လော့။” ရောမ ၁၂း ၂၁
မေတ္တာတော်သတင်းကောင်းမှ ခြားနားသော သက်ရောက်မှုနှစ်ခု
ကောင်းကင်မှ စာတန်နှင့် သူ့တမန်များကို မြေကြီးပေါ်သို့ ချခဲ့စဉ်က ကောင်းကင်တွင်ဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့ကြောင်း ဗိမာန်တော်ကို သန့်စင်သည့် ပုံပြင်က အရိပ်အမြွက်ပြပေးပါသည်။ (ဗျာဒိတ် ၁၂း ၉) လူအများစုက ဘုရားသခင်သည် စာတန်ကို ဖမ်းချုပ်ကာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပစ်ချလိုက်သည်ဟုသာ ယူဆကြသည်။ သူတို့က ဘုရားသခင်နှင့် ကောင်းကင်တမန်တို့သည် စာတန်နှင့်သူတမန်များနှင့် ကိုယ်ထိလက်ရောက် စစ်တိုက်ကြကာ သူတို့ကို ကောင်းကင်မှပစ်ချသည်ဟု ယူဆကြသည်။ သို့သော်လည်း ရှင်ယုဒကျမ်းက “မိမိတို့အခွင့်အရာကို မစောင့်၊ မိမိတို့ နေရာအရပ်ကို စွန့်ပစ်သော ကောင်းကင်တမန်တို့ကို”ဟု ဖော်ပြထားသည်။ (ယုဒ ၁း ၆) စာတန်နှင့် သူ့အပေါင်းဖော်တို့သည် မေတ္တာတော်ရှင် ဘုရားသခင်၏ မျက်မှောက်တော်ကို မခံမရပ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်၍ ကောင်းကင်မှ ထွက်ပြေးခဲ့ကြသည်။ ရှင်ပေါလုက မေတ္တာတော်သတင်ကောင်းမှ လာသော ထိုသက်ရောက်မှု သဘောတရားအကြောင်း (သို့) သတင်းကောင်းကို လက်မခံလိုဘဲ ဘုရားသခင်ထံမှ ထွက်ပြေးသဖြင့် ထာဝရကျဆုံးခြင်း ကြုံတွေ့ကြကြောင်း ဤသို့ပြောထားသည်။
“အဘယ်သို့နည်းဟူမူကား၊ ငါတို့သည် ကယ်တင်သောသူတို့၌၎င်း၊ ဆုံးရှုံးသောသူတို့၌၎င်း၊ ဘုရားသခင်အား ခရစ်တော်၏ အမွှေးအကြိုင်ဖြစ်ကြ၏။ ဆုံးရှုံးသောသူတို့၌ကား၊ သေခြင်းတိုင်အောင် သေခြင်း၏အမွှေးအကြိုင်ဖြစ်ကြ၏။ ကယ်တင်သော သူတို့၌ကား၊ အသက်ရှင်ခြင်းတိုင်အောင် အသက်ရှင်ခြင်း၏အမွှေးအကြိုင်ဖြစ်ကြ၏။ သို့ဖြစ်၍ ဤအမှုအရာ တို့နှင့် အဘယ်သူထိုက်တန်သနည်း။ ၂ကော ၂း ၁၅၊ ၁၆
ဗိမာန်တော်ရှိ ထိုလူများသည် ဘုရားသခင်၏ ထာဝရမေတ္တာတော်၊ အကြင်နာတရားကို မယုံကြည်ကြသောကြောင့် သူတို့အား ယေရှု ဘေးအန္တရယ်ပြုမည်ကို ကြောက်သဖြင့် အထံတော်မှ ထွက်ပြေးကြ၏။ ထိုသဘောတရားကို ဆာလံကျမ်းတွင်လည်း တွေ့နိုင်သည်။
“သန့်ရှင်းသောသူအား မိမိသန့်ရှင်းကြောင်းပြတော်မူ၏။ ကောက်ကျစ်သောသူကိုကား မိမိဉာဏ်များကြောင်း ပြတော်မူ၏။” ဆာလံ ၁၈း ၂၆ (MSBU)
ဉာဏ်များခြင်းဆိုသည်မှာ “ရက်စက်ကောက်ကျစ်ခြင်း” (သို့) “ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်စေခြင်း” ဖြစ်သည်။ မိမိတို့၏ ရန်သူများကို ဘေးဒုက္ခပေးလိုသူများသည် သူတို့အကျင့်စရိုက်ကို သူတို့ကိုးကွယ်သောဘုရားထံ လွှဲချကာ၊ ငါတို့ဘုရားသည်လည်း ငါတို့နည်းတူ ပြုမူမည်ဟု တွေးထင်တတ်ကြသည်။
ပရောဖက်ဟေရှာယက “သူတို့ခံရသမျှသော ဆင်းရဲဒုက္ခကို ကိုယ်တော်လည်း ခံတော်မူခဲ့၏။ မျက်မှောက်တော်ရှိ ကောင်းကင်တမန်သည် သူတို့ကို ကယ်တင်ခဲ့၏။ ကိုယ်တော်သည် မေတ္တာ၊ကရုဏာဖြင့် သူတို့ကို ရွေးနုတ်တော်မူခဲ့၏။ ရှေးကာလပတ်လုံး သူတို့ကို ချီဆောင်တော်မူခဲ့၏။ သို့သော် သူတို့သည် ပုန်ကန်ခြင်းဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို ဝမ်းနည်းစေခဲ့သောကြောင့် ကိုယ်တော်သည် သူတို့၏ရန်သူဖြစ်သွား၍ သူတို့ကို တိုက်ခိုက်တော်မူ၏။” ဟုရေးသားခဲ့သည်။ (ဟေရှာယ ၆၃း ၉၊ ၁၀)
ခရစ်တော်သည် သူတို့ခံရသော ဆင်းရဲဒုက္ခကို ခံယူပေးနေစဉ် သူတို့သည် ပုန်ကန်၍ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကို ဝမ်းနည်းအောင်လုပ်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် “ကိုယ်တော်သည် သူတို့၏ရန်သူဖြစ်သွား၍ သူတို့ကို တိုက်ခိုက်တော်မူ၏။” ထိုဝါကျက စကားနားမထောင်သောကြောင့် ကိုယ်တော်သည် သူတို့ကို ကျောခိုင်းကာ၊ ရန်ဘက်ပြုရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်ဟု မဆိုလိုပါ။ ဆင်းရဲဒုက္ခခံရသောအခါ ဘုရားသခင်သည် သူတို့ကို အပြစ်ပေးနေသည်ဟု သူတို့ယုံကြည်ကြသည်။ သူတို့အမြင်တွင် ဘုရားသခင်သည် သူတို့ကိုရန်ဘက်ပြုသည်ဟု ယူဆသွားကြသည်။ သူတို့ကို ဘုရားသခင် ရန်ဘက်ပြု၍ တိုက်ခိုက်သည်ဟု သူတို့ယုံကြည်ကြသည်ဟု ဆိုလိုပါသည်။
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအချက်မှာ ဆာလံ ၁၈း ၂၆တွင် သုံးထားသော ဉာဏ်များသည်(tortuous) ဟူသော စကားလုံးသည် ဟေဗြဲဘာသာတွင် פָתַל (pathal) ဖြစ်သည်။ ထိုစကားလုံးတွင်(to wrestler) “နပန်းလုံးသည်”ဟူသော အနက်လည်းရှိနေသည်။ ထို့ကြောင့် Young’s literal translation အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ကျမ်းတွင် အောက်ပါအတိုင်း ရေးထားသည်။
““With the pure Thou showest Thyself pure, And with the perverse showest Thyselfawrestler.”
ယာကုပ်ပုံပြင်နှင့်လည်း ဆင်တူနေပါသည်။ ညနက်အချိန်တွင် ယေရှု၏ အထိတွေ့ကို ယာကုပ်ခံစားမိသည်နှင့် ရန်သူဟု ထင်မှတ်သောကြောင့် သူ့ကို နပန်းလုံးခဲ့သည်။ (ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃၂း ၂၂-၃၂) ကျွန်ုပ်တို့အသက်တာတွင် ဆင်းရဲဒုက္ခများ၊ အဆင်မပြေမှုများကြုံတွေ့သောအခါ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဒဏ်ခတ်သည်ဟု ဘယ်နှစ်ကြိမ်များ တွေးမိကြပါသလဲ။ ဘုရားသခင်သည် အစဉ်အမြဲကျွန်ုပ်တို့ဘက်၌ ရှိတော်မူကိုယုံကြည်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ကြောက်စရာမရှိပါ။
“ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ဘက်၌ ရှိတော်မူလျှင် မည်သူသည် ငါတို့ကို ဆန့်ကျင်နိုင်မည်နည်း။” ရောမ ၈း ၃၁
ဘုရားသခင်အကြောင်း သင့်ခံယူချက်အပေါ် အရာအားလုံး မူတည်နေပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် နားမထောင်သော သား၊သမီးများကို အိမ်တော်ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ချင်သောဘုရား၊ ကျွန်ုပ်တို့ခံရမည့် ဆင်းရဲဒုက္ခအပေါင်းကို ခံယူပေးသောဘုရား၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်နှင့် ပြည့်ဝသောဘုရားဖြစ်သည်ဟု သင်ယုံကြည်ပါသလား။ ထိုသို့မဟုတ်ဘဲ သူ့ကို မနာခံသောသူရှိသမျှကို သတ်ပစ်သောဘုရား၊ သနားညှာတာမှုမရှိ၊ လက်စားချေတတ်သော တရားသူကြီးကဲ့သို့သောဘုရားဟု ထင်မိပါသလား။ အကယ်၍ သင်သည် ဒုတိယအချက်အတိုင်း ဘုရားသခင်ကို ထင်မြင်နေသည်ဆိုလျှင် ခရစ်တော်ပြန်လည်ကြွလာသောအခါ သင်သည်လည်း ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင် ဖော်ပြထားသကဲ့သို့လည်းကောင်း ဗိမာန်တော်မှ ထွက်ပြေးသွားသူများကဲ့သို့ လည်းကောင်း ခံစားရလိမ့်မည်။
“မိုဃ်းကောင်းကင်သည် စာစောင်လိပ်သကဲ့သို့ လွင့်သွား၏။ တောင်များ၊ ကျွန်းများအပေါင်းတို့သည် မိမိတို့နေရာအရပ်မှ ရွေ့ကြ၏။ လောကီဘုရင်၊ မှူးမတ်၊ စစ်သူကြီး၊ သူဌေး၊ သူကြွယ်၊ ခွန်အားကြီးသောသူမှစ၍ ကျွန်များ၊ လူလွတ် များအပေါင်းတို့သည် မြေတွင်း၌၎င်း၊ တောင်ပေါ်မှာရှိသော ကျောက်များ၌၎င်း၊ ပုန်းရှောင်လျက်နေ၍၊ ထိုတောင်များ၊ ကျောက်များတို့ကို ခေါ်လျက်၊ ငါတို့အပေါ်သို့ကျကြပါ။ ပလ္လင်ပေါ်မှာ ထိုင်တော်မူသောသူ၏ မျက်နှာနှင့် သိုးသငယ်၏ အမျက်တော်ကို ကွယ်ကာ၍၊ ငါတို့ကိုဖုံးအုပ်ကြပါ။ အမျက်တော် ထင်ရှားသောနေ့ကြီး ရောက်ပါပြီတကား။ အဘယ်သူသည် ခံရပ်နိုင်မည်နည်းဟု ပြောဆိုကြ၏။” ဗျာဒိတ် ၆း ၁၄-၁၇
သို့သော် ဘုရားသခင်အပေါ် သင့်အမြင်သည် နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် ညီနေလျှင်၊ ဘုရားသခင်သည် မေတ္တာရှင်ဖြစ်ကြောင်း သိ၍၊ယုံကြည်လျှင် ယေရှုကြောင့် ကလေးသူငယ်များ ဝမ်းမြောက်ကာ၊ မျက်ကန်း၊ ခြေ၊လက်အင်္ဂါမစုံသူများ အနာရောဂါငြိမ်းရသကဲ့သို့ ယေရှု၏ကြွလာခြင်းကို ဝမ်းမြောက်စွာ ကြိုဆိုခွင့် သင်ရရှိပါလိမ့်မည်။
“သေခြင်းကိုလည်း နှစ်မွန်းဆုံးရှုံးစေတော်မူလိမ့်မည်။ အရှင်ထာဝရဘုရားသည်လည်း၊ ခပ်သိမ်းသော မျက်နှာတို့မှ မျက်ရည်ကိုသုတ်တော်မူလိမ့်မည်။ ကိုယ်တော်၏လူတို့သည် ခံရသော ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုလည်း၊ မြေကြီး တပြင်လုံး၌ ပယ်ရှင်းတော်မူလိမ့်မည်ဟု၊ ထာဝရဘုရား အမိန့်တော်ရှိ၏။ ထိုကာလ၌ ကြည့်ရှုလော့။ ဤအရှင်ကား၊ ငါတို့ မြော်လင့်သော၊ ငါတို့၏ဘုရားသခင်တည်း။ ငါတို့ကို ကယ်တင်တော်မူလိမ့်မည်။ ဤအရှင်ကား၊ ငါတို့မြော်လင့်သော ထာဝရဘုရားတည်း။ ကယ်တင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကြောင့်၊ ငါတို့သည် ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းကြကုန်အံ့ဟုဆို ကြလိမ့်မည်။” ဟေရှာယ ၂၅း ၈၊ ၉
ဘုရားသခင် အမင်္ဂလာကို ဖန်ဆင်းခဲ့သလား။ (ဟေရှာယ ၄၅း ၇)
K. Mullins • ဇွန် 07, 2022 • 44 ထိရောက်မှုများ ယေရမိ ၁၈း ၇-၁၀ ငါကြံစည်သောဘေးဒဏ်ကို ငါနောင်တရမည်ဟု ဘာကြောင့်ဘုရားသခင်ပြောခဲ့သလဲ။
K. Mullins • ဇွန် 07, 2022 • 42 ထိရောက်မှုများ ဗိမာန်တော်ရှိ ငွေပွဲစားများကို မောင်းထုတ်ခဲ့စဉ်က ယေရှု အမျက်ဒေါသဖြင့်…
K. Mullins • ဇွန် 07, 2022 • 43 ထိရောက်မှုများ ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသ။ (ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၆း ၁၄-၁၇)
K. Mullins • ဇွန် 06, 2022 • 45 ထိရောက်မှုများ ကျောက်ခဲနှင့်ပစ်သတ်ခြင်းအပြစ်ဒဏ်ကို ဘုရားသခင်ချမှတ်ခဲ့ပါသလား။
K. Mullins • ဇွန် 03, 2022 • 43 ထိရောက်မှုများ ဘုရားသခင့် တရားစီရင်ခြင်း
J. Deichsel • မေ 13, 2022 • 64 ထိရောက်မှုများ ကျဆုံးကောင်းကင်တမန်များနှင့် လူ့သမီးတို့မှ မွေးဖွားလာသော လူကောင်ကြီးများကို…
K. Mullins • မေ 12, 2022 • 88 ထိရောက်မှုများ ဧလိယကြောင့် စစ်သားများကို ဘုရားသခင် တကယ်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့သလား။
K. Mullins • မေ 12, 2022 • 64 ထိရောက်မှုများ ယေရှုက ထိုမိန်းမကို ခွေးဟု မှတ်ယူလေသလော။
K. Mullins • နိုဝင်ဘာ 11, 2021 • 287 ထိရောက်မှုများ ခရစ်ယာန်နိုင်ငံရေးနှင့် ယေရှု၏ ခရစ်ယာန်ဘာသာ
D. Brown • အောက်တိုဘာ 28, 2021 • 284 ထိရောက်မှုများ
Jeremiah • ဖေဖော်ဝါရီ 04, 2021 • 560 ထိရောက်မှုများ ၇။ သဏ္ဌာန်တော်နှင့်အညီ ဖန်ဆင်းခြင်း
A. Ebens • ဇွန် 01, 2021 • 427 ထိရောက်မှုများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သော ဘုရား
G. Hullquist • ဩဂုတ် 05, 2021 • 369 ထိရောက်မှုများ ၁၉။ ငါတို့အပြစ်ကြောင့် အနာတရဖြစ်
A. Ebens • စက်တင်ဘာ 16, 2021 • 348 ထိရောက်မှုများ ယေရှုက ထိုမိန်းမကို ခွေးဟု မှတ်ယူလေသလော။
D. Brown • အောက်တိုဘာ 28, 2021 • 284 ထိရောက်မှုများ ကျဆုံးကောင်းကင်တမန်များနှင့် လူ့သမီးတို့မှ မွေးဖွားလာသော လူကောင်ကြီးများကို…
K. Mullins • မေ 12, 2022 • 64 ထိရောက်မှုများ ဘုရားသခင့် တရားစီရင်ခြင်း
J. Deichsel • မေ 13, 2022 • 64 ထိရောက်မှုများ ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသ။ (ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၆း ၁၄-၁၇)
K. Mullins • ဇွန် 06, 2022 • 45 ထိရောက်မှုများ ဘုရားသခင် အမင်္ဂလာကို ဖန်ဆင်းခဲ့သလား။ (ဟေရှာယ ၄၅း ၇)
K. Mullins • ဇွန် 07, 2022 • 44 ထိရောက်မှုများ ကျောက်ခဲနှင့်ပစ်သတ်ခြင်းအပြစ်ဒဏ်ကို ဘုရားသခင်ချမှတ်ခဲ့ပါသလား။
K. Mullins • ဇွန် 03, 2022 • 43 ထိရောက်မှုများ ဗိမာန်တော်ရှိ ငွေပွဲစားများကို မောင်းထုတ်ခဲ့စဉ်က ယေရှု အမျက်ဒေါသဖြင့်…
K. Mullins • ဇွန် 07, 2022 • 43 ထိရောက်မှုများ ယေရမိ ၁၈း ၇-၁၀ ငါကြံစည်သောဘေးဒဏ်ကို ငါနောင်တရမည်ဟု ဘာကြောင့်ဘုရားသခင်ပြောခဲ့သလဲ။
K. Mullins • ဇွန် 07, 2022 • 42 ထိရောက်မှုများ